Ny antony Daty sipa Meksikana (Tsara Indrindra Tia) - Meksikana ny Lahatsary amin'ny Chat
Ny antony Daty sipa Meksikana (Tsara Indrindra Tia) — Meksikana ny Lahatsary amin’ny Chat
Izay tsy mahalala izay Meksikana ankizivavy efa maro ireo toetra izay mahatonga ny olona te daty azy mafy tokoa. Ny anarany dia ny vahiny mijery, ny mpankafy fihetseham-po, na ny sonia lovia. Meksikana zazavavy miaraka amin’ny tsara tarehy ny fiteny foana no mahatonga ny olona te hahalala ny momba azy ireo. Ianao no mila ny sasany kokoa noho ny antony hoe nahoana ianao no tokony daty sipa Meksikana. Indro tonga ny lisitra momba ny antony daty sipa Meksikana: Fa noho ny tovovavy amin’ny hatsatra fotsy hoditra, ny tovovavy izay manana tanned hoditra no mahafatifaty amin’ny lafiny sasany. Eny izy ireo manome ny ara-pahasalamana-tarehy hoditra, hafakely hoditra, ka mahatonga azy ireo kokoa ny mijery sy ny tsara kokoa. Meksikana lovia dia fanta-daza manerana izao tontolo izao. Rehefa daty sipa Meksikana, dia azo antoka fa ho afaka mihinana azy araka izay tianao. Izy ihany koa dia afaka mahandro azy ireo ho anao ary izany no iray amin’ireo matsiro antony daty sipa Meksikana. Tsy afaka hilaza ny fomba be Meksikana ny tovovavy toy ny mamihina. Ny namihina efa mafy ny dikan’ny hoe»na inona na Inona afaka ny ho tonga eo amintsika»toe-tsaina, izay mahatonga ny fifamihinana na dia liana kokoa. Izy ireo dia tsy mampaninona mamihina na dia amin’ny hafanana ny vanin-taona mafana. Raha hitranga mba handrava azy, ny fifamihinana dia zavatra ianao dia malahelo ny tena. Rehefa ny sipa Meksikana manontany anao na ianao afaka ny ho tonga eo ny trano sy ny fanandramana ny nahandro, dia tena midika izany. Izy tsy te-lelam-pitana ianao ka na inona na inona. Fotsiny izy ireo te anao ny tsiro ny lovia izy mpahandro, satria Meksikana zazavavy tia namboarina sakafo fa tsy ny mihinana avy. Ny olona milaza Meksikana manana ny tena marina maso. Tsy afaka mahita na inona na inona negativity na fihetseham-po ratsy ao amin’ny lalina, dia nazava ny masony. Izy ireo ihany koa ny tsy mampiseho na ratsy fitondran-tena sy ny toe-tsaina. Izy ireo dia manatsara ny zava-tsara sady natahotra izy ireo ny filazana lainga. Rehefa mijery ny masony, dia tsy mijery lavitra. Ho madio toy ny masony azo, Meksikana ny tovovavy ihany koa feno fanoloran-tena tia. Izy ireo dia manao na inona na inona fa ny fitiavana, ary ny iray dia ny fitiavana. Izy ireo dia miezaka ny tsara indrindra dia tsy nametraka anao teo. Mety ho misy tantara an-tsehatra nandray anjara, fa ataony fa ny hahatonga anao mihomehy. Raha misy zavatra iray Meksikana ny tovovavy no tsy tia dia nikapoka manodidina ny roimemy.
Misy roa ihany no mamaly ny zava-drehetra:»eny»sy»tsia».
Tsy misy na oviana na oviana»angamba»
Izany no mahatonga indraindray izy dia tsy hanontany anao izy raha toa matavy, satria mety matahotra anao amim-pahatsorana ny valiny. Miteny ao amin’ny mahitsy, tena marina fa ny fomba mety tsy tsara mandrakariva, toy ny marina valiny dia tsy manome antoka fa ny hafa kosa tsy haratra. Nefa ny marina, tsy dia maro ny olona afaka miresaka mivantana ao amin’io izao tontolo izao. Fa ny tsy fahita firy ny kalitao izay hita ao amin’ny sipa Meksikana.
Koa diniho ny tenanao tsara vintana
Tsara rehefa avy aminy, dia hisy hafa hatsaran-tarehy izany, dia hisambotra am-ponao. Meksikana salsa, zavatra ianao, dia tsy mahita na inona na inona ampahany hafa eo amin’izao tontolo izao. Tahaka ny azy, dia ho fanombohana ny zava-drehetra amin’ny salsa. Ny hamafin’ny ao ny saosy dia zavatra Meksikana tena mirehareha. Tsy ela taorian’ny manomboka mampiaraka, dia zatra salsa ihany koa. Meksika no nalaza noho ny sakafo, saosy, ary chili. Ireo telo hita ao amin’ny sakafo ao saika ny rehetra ny lovia. Ny hamafin’ny spiciness dia handoro ny vava sy ny kibo. Ny fo dia handoro ihany koa, fa mafy ny fitiavana, mazava ho azy. Iza no tsy mahalala fa ny teny espaniola no iray amin’ireo tsara indrindra amin’ny fiteny izay toa tsara tarehy rehefa niteny. Ianao dia tsaratsara kokoa ny manomboka dia hianatra ny sasany amin’ireo teny espaniola raha toa ka mampiaraka azy. Na fianarana ny teny miara-miaraka aminy toy ny mpampianatra dia tsy hevitra ratsy. Ny fianarana ny sasany espaniola rehefa daty sipa Meksikana hitondra anao be dia be ny soa. Ny iray azy ireo, dia nahita izy, rehefa tezitra eny sy nanompa anao. Noho ny fomba izy miteny dia tsara tarehy, toy izany koa ve ny fomba izy no nahatonga ny ozona hianjera. Tsy fantatro izy, dia ozona teo ianao raha tsy fantatrao ny fiteniny.
Iray hafa ny antony maro daty sipa Meksikana
Kolotsaina meksikana mampianatra izay tsy maintsy tsy hoe tsy misy. Noho izany, izy ireo efa tsy miteny hoe»tsia». Raha toa ka mangataka azy mba hanao zavatra ary izy amin’izao fotoana izao dia sahirana amin’izao fotoana izao, fa tsy miteny hoe»tsia»izy, dia azo inoana fa milaza hoe,»eny, saingy mety ho elaela». Na dia tiany ny tsy mety ianao, dia hiezaka ny tsara indrindra dia tsy ny hoe tsy misy. Ny meksikana (lahy sy vavy) dia fantatra amin’ny anarana ho namana, mahafinaritra, ary nandeha mora. Na aiza na aiza izy ireo handeha, foana izy ireo mazava ny rivotra iainana. Antoko tsy antoko raha tsy misy ny Meksikana, satria izy ireo dia hahatonga anao mandihy alina manontolo. Sy ny marina, ny fitiavana dia tsy ny fitiavana, raha tsy miaraka ny Meksikana. Na dia eo aza ny fitiavana ho an’ny antoko, sy ny fomba foana izy ireo mazava ny misy azy, Meksikana aza mandany andro rehetra ao anatin’ny herinandro fotsiny ho an’ny antoko. Tsara tarehy izy ireo tompon’andraikitra amin’ny fiainany sy ny tsara fantatrao izay fotoana ny asa mafy sy ny fotoana inona no milalao mafy. Raha te-ho antoko miaraka amin’ny sipa Meksikana (sy ny namany), dia hitehirizany azy ihany rehefa zoma sy sabotsy. Meksikana matetika tsy antoko afa-tsy eo ireo roa andro. Rehefa avy niasa mafy nandritra ny herinandro, ary amin’ny fety ny faran’ny herinandro, Meksikana no mahalala raha mba hiala sasatra. Izy ireo nanolo-tena ny alahady ihany no ho sasatra sy recharge ny angovo ho an’ny sahirana ny alatsinainy mialoha. Raha tsy sasatra, Meksikana no misy famindram-po ho an’ny fanahiny amin’ny andro alahady. Izy ireo no mandany izany amin ny fiangonana, na manao ny sasany hafa ireo adidy ara-pivavahana. Izany no fomba afaka mandanjalanja ny fiainana. Meksikana ankizivavy dia ny tsara indrindra rehefa tonga ny fanafody voajanahary ho an’ny tena sarotra. Rehefa mahatsapa ny mangatsiaka, dia foana ny tantely, voasarimakirana dite ho anao, raha toa ianao manana olana noho ny torimaso, izy no hanome anareo chamomile dite, sy ny sisa. Izy ireo koa dia mahafantatra tsara ny fomba hihena ny fifadian-kanina amin’ny fomba voajanahary. Raha toa ianao ka mbola mitondra ny datin ny sipa Meksikana, dia ho fantatrareo fa ny fitiavana sy ny ny fitiavana no zavatra tsara indrindra, ary koa izany ny fototra mafy orina eo amin’ny fifandraisana. Meksikana ny ankizivavy fantatra amin’ny anarana ho be fitiavana indrindra, ny fikarakarana, sy mahaliana ny olona. Tsara, liana fahatsapana tonga niaraka tamin’ny fampahatsiahivana fohy ny toe-pihetseham-pontsika. Araka izy ireo tia anao, izy koa dia mora foana ny mahazo manontany anao. Mety tsy hahita izany eo amin’ny sehatra tany am-boalohany ny mampiaraka, fa ho hitanao izany toetra farany. Fa dia nahoana no tokony hahafantatra na izy, voaozona ianareo na tsia. Afa-tsy fandrahoan-tsakafo, zavatra iray Meksikana tovovavy tsara amin’ny fampiharana ny make-up. Izy dia tsy tonga teo ianao raha tsy manao ny volomaso na curling ny eyelashes voalohany. Meksikana hitombo sy miaina ao afovoany ny lahy sy ny vavy olana eo amin’ny fiaraha-monina. Meksikana ny zazavavy mba ho mora mankato sy manaja olona be dia be. Na izany aza, izany dia tsy midika hoe tsy afaka mampijaly azy na hitondra ny ratsy. Raiso ity toy ny vintana sy ny soso-kevitra fa tokony handray tsara kokoa ny fikarakarana azy. Ny lehilahy matetika no tsy dia niraharaha loatra ny tarehiny. Fa indray mandeha ianao daty sipa Meksikana, tahaka ny tsy dia miraharaha ny ny tarehiny, dia manomboka ny fitantanana ny tarehy loatra. Rehefa raiki-pitia amin’ny sipa Meksikana, dia tsy misy fomba mba hiverin-dalana. Raha hitranga mba handrava azy, dia tonga dia mora ny mampitaha azy amin’ny vaovao sipa, tahaka ny tsy hisy hafa tovovavy toy ny Meksikana. Misy be dia be ny antony betsaka ho anao ny manomboka ny daty sipa Meksikana, ary ny lisitra dia tsy hihaona amin’ny farany raha toa isika ka hitady ny sasany kokoa. Afa-tsy ireo ankapobeny ny antony, tsy dia ho be dia be ny tian’ny manokana mandray anjara raha toa ka te hampiaraka. Na inona na inona ary na iza na iza te-ho amin’ny daty, ny fitiavana dia tsara tarehy ny zavatra tsy maintsy ho tia sy mandala
← Hihaona. Mampiaraka toerana maimaim-poana, tsy misy fisoratana anarana, ho an'ny fifandraisana matotra
Toerana ratsy indrindra mba Hihaona amin'ny Lehilahy HuffPost →